उम्मेदवारी फिर्ता बारे के भन्छन खिमलाल देवकोटा ?
अब हामीले अरूको विरोधमा समय खेर फाल्नु हुँदैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अरूको विरोधमा समय खेर फाल्न नहुने बताएका छन् । एमाले विवाद मिल्ने दिशातिर अग्रसर भएपछि उनले फेसबुकमा भनेका छन्, “नेकपा (एमाले)का…
माधव समूह तत्काल ओली सरकारमा सहभागी नबन्ने
काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह तत्काल केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नबन्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले माधव पक्षलाई समेत समेटेर सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी गरेपनि नेपाल पक्ष तत्काल…
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्दैछन् । ओलीले दिउँसो साढे २ बजे शपथ ग्रहण गर्न लागेको र त्यसका लागि राष्ट्रपति भवल शीतल निवासमा तयारी भइरहेको…
सांसदको टाउको गन्न छोडेर नागरिकको जीवन रक्षामा लागौं : थापा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा पुनः केपी शर्मा ओली नियुक्तिसँगै तत्काललाई सांसदको संख्या गन्ने काम रोकिने भएकाले अब जनताको जीवन रक्षामा ध्यान दिन नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले आग्रह गरेका छन्। उनले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा…
माधव नेपाललगायत चार नेतालाई निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई फोन गरेर यो के तमासा गर्नुभएको ? भनेका थिए। उनले तपाईंले त निलम्बन फुकुवा गर्नुभएछ, कारबाही फुकुवा गर्नुभएछ,…
सबैले तिरस्कार गरेका ओलीको विकल्प खोज्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण : डा. भट्टराई
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जनतालाई कोरोना आतंकबाट राहत दिनसक्ने वैकल्पिक सरकार दिन प्रतिपक्षी दलहरू चुक्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन् । केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ती…
गठबन्धन सरकारका लागि बहुमत पुर्‍याएर बिहीबार साँझ ९ बजेभित्रै दाबी प्रस्तुत गर्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा खेमा दिनभर व्यस्त थिए । तर सबैको प्रतीक्षा एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको…
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा पार्टीको विधान, नियमावली र केन्द्रको परिपत्रानुसार प्रक्रिया पुर्‍याई विवादरहित प्राप्त क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी जिल्ला र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय…
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विवाद कार्यदल बनाएर समाधान गर्ने सहमति बनेको छ । चपली हाइटस्थित क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा बिहीबार प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार…